About Us - Hangzhou midi Air Ngokwahlukana Izinsiza kusebenza Co., Ltd
Hangzhou midi Air Ngokwahlukana Izinsiza kusebenza ManufacturingCo., Ltd kuyinto nomkhiqizi professional oveza PSA nitrogen imishini ukwenza, PSA-mpilo okwenza imishini, VPSA-mpilo okwenza imishini, onomfutho imishini emoyeni uhlanzekile njll
Inkampani ngokuhlanganiswa-R & D, design yokukhiqiza nokumaketha. ufanelekele nemibandela ephelele ukukhiqizwa, ukufakwa imishini, ukumisa, ukugcinwa kanye service. Iphinde ukuqasha uchwepheshe emkhakheni impahla kanye ne-engineering wokushintsha kwamandla nokwakheka kwezinto ezintsha njengoba consultant lobuchwepheshe ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yethu lobuchwepheshe uhlale emgqeni ubuchwepheshe futhi unikeze isiqinisekiso onokwethenjelwa futhi yesayensi design umkhiqizo kanye nokukhiqiza. Sinopoly emoyeni ngokwahlukana sekuba umholi lobuchwepheshe wohlu onomfutho emoyeni uhlanzekile futhi ingcindezi jika adsorption.
imikhiqizo yeNkampani ngokuyinhloko ihlukaniswe: PSA nitrogen (i-oksijini) imishini, VPSA kohlaziyo imishini oksijini, cleaner imishini igesi zokuhlanjululwa, ulwelwesi ngokwahlukana nitrogen (i-oksijini) amadivaysi, iqhwa dryer, micro ukushisa okuzivuselela dryer, heatless dryer okuzivuselela, ukushisa okuzivuselela dryer, ukuhlunga kanye nezinye eziyishumi uchungechunge Ukucaciswa. Imikhiqizo kabanzi petroleum, Petrochemical, amandla kagesi, amakhemikhali umkhakha, yokusansimbi umkhakha, embonini yamalahle, imboni eyenza imithi, Aerospace, embonini yezimoto, epulasitikini umkhakha, amakhemikhali fibre, iraba, ingilazi umkhakha, umkhakha ukudla, umkhakha electronic futhi aquaculture nakweminye imikhakha .
Inkampani itholakala Fuyang Gaoqiao Industrial Park eyayiseduze Hangzhou West echibini, Fuchun emfuleni, Qiandao echibini nakwezinye izindawo kazwelonke izintshisekelo.
Inkampani wumgomo: okuhle sifuna ukuthuthukisa ikhwalithi enhle sifuna sha, inkolelo ezinhle ofuna isevisi.
Inkonzo yethu wumgomo: ukwaneliseka ikhasimende ukuphishekela ibhizinisi laphakade!